ယခုရက်သတ္တပတ်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံ သံအမတ်က မော်စကိုသို့ ပြန်လာမည်ဟု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြော - Xinhua News Agency
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဝါရှင်တန်ဒီစီတွင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီး John Sullivan အား ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ရုရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး John Sullivan သည် ယခုရက်သတ္တပတ်အတွင်း မော်စကိုသို့ ပြန်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Ned Price က ဇွန် ၂၁ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။“ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ရုရှား အစိုးရနဲ့ ဆက်သွယ်ရေးချန်နယ်တွေ ဖွင့်လှစ်ဖို့ ကတိပြုထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါက အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ အကျိုးစီးပွားကိုသာမက နှစ်နိုင်ငံကြား အတွက်အချက်မှားယွင်းမှု အန္တရာယ်ကို လျှော့ချရန်အတွက်လည်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု Price က သတင်းထောက်များအား တယ်လီဖုန်းမှတစ်ဆင့် ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ရုရှားသံအမတ်ကြီး Anatoly Antonov သည်လည်း ဝါရှင်တန်ဒီစီသို့ ပြန်လည်သွားရောက်လျက်ရှိကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ယခုနှစ်အစောပိုင်း၌ ဝါရှင်တန်နှင့် မော်စကိုကြား တင်းမာမှုများ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ မော်စကိုတွင် အဆင့်မြင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ရန် ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက Antonov အား မတ်လက ပြန်လည်ခေါ်ယူခဲ့သည်။ အလားတူအကြောင်းပြချက်ဖြင့်ပင် Sullivan သည်လည်း ဧပြီလတွင် ရုရှားမှ ထွက်ခွာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်နှင့် ရုရှားနိုင်ငံ သမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင်တို့သည် ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်က ၎င်းတို့၏ သံအမတ်ကြီးများကို ၎င်းတို့၏ နေရာအသီးသီးသို့ မကြာမီပြန်လည်စေလွှတ်ရန် ဂျီနီဗာ၌ သဘောတူညီချက် ရရှိခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
အမေရိကန်-ရုရှား ဆက်ဆံရေးသည် ယခုနှစ်များအတွင်း အနိမ့်ဆုံးအမှတ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ နှစ်နိုင်ငံတို့သည် ယူကရိန်း၊ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲအား ကြားဝင်နှောင့်ယှက်မှု စသည်တို့နှင့်ပတ်သက်၍ ထင်ရှားသော ကွဲပြားမှုများလည်း ရှိခဲ့သည်။
ဘိုင်ဒန်အစိုးရအနေဖြင့် ကရင်မလင် ဝေဖန်ရေးသမား Alexei Navalny အဆိပ်မိကြောင်း စွပ်စွဲချက်ဖြင့် ရုရှားနိုင်ငံအား ထပ်မံပိတ်ဆို့မှုများ လုပ်ဆောင်ရန် ပြင်ဆင်နေကြောင်း အမျိုးသားလုံခြုံရေး အကြံပေး Jake Sullivan က ဇွန် ၂၀ ရက်၌ ပြောခဲ့သည်။
ရုရှားနိုင်ငံ ဖက်ဒရယ်လုံခြုံရေးဌာနက ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဩဂုတ် ၂၀ ရက်တွင် Navalny အား အဆိပ်ခတ်ရန် Novichok ဟု လူသိများသော nerve agent ကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း အမေရိကန် ထောက်လှမ်းရေး အသိုင်းအဝိုင်းက သတ်မှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရုရှားနိုင်ငံက Navalny ၏ အမှုသည် ပြည်တွင်းရေးသက်သက်သာဖြစ်ပြီး ပြည်ပမှ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအား ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြားလျက် အဆိုပါ စွပ်စွဲချက်များအား ထပ်ခါတလဲလဲ ပယ်ချခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
WASHINGTON, June 21 (Xinhua) — U.S. Ambassador to Russia John Sullivan will return to Moscow this week, State Department spokesperson Ned Price said on Monday.
“We remain committed to open channels of communication with the Russian government,” Price told reporters inaphone brief. “Both asameans to advance U.S. interests but also to reduce the risk of miscalculation between our two countries.”
The U.S. intelligence community assessed that officers of Russia’s Federal Security Service usedanerve agent known as Novichok to poison Navalny on Aug. 20, 2020.
Russia has repeatedly denied such accusations, saying the Navalny case isapurely domestic affair and foreign intervention is not allowed. ■
Then U.S. Deputy Secretary of State John Sullivan speaks duringapress conference in Washington D.C., the United States, on Dec. 14, 2017. (Xinhua/Ting Shen)